Edge Chromium, Microsoft webhu browser, ichauya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Zviri pamutemo: Edge Chromium, Microsoft browser, iri kuuya kuLinux
Ini pachangu, handifarire kutaura kuti chimwe chinhu chiri pamutemo kusvikira chaicho, asi dzimwe nguva chinofanira kuitwa. Uye ndizvozvo muna Kubvumbi Microsoft akadaro , que Edge Chrome, iyo vhezheni yeChromium-based web browser yako, inogona kusvika paLinux, kutanga kwaGunyana vakatiudza Vakanga vachishanda pairi uye nezuro, Mbudzi 4, vakapa mukuru hongu kuitira kuti tishandise kurudziro yekambani iyo Satya Nadella anomhanya paLinux.
Vakaita izvi panguva yeState yeBrowser musangano pamusangano wavo weIgnite 2019 wakaitika muOrlando. Ivo vakapawo zvimwe zvimwe, senge iyo Edge Chromium ichave iri inowanikwa kubva munaNdira 15. Parizvino, inogona kuyedzwa mu beta kana tikadzora mugadziri kubva Iyi link. Zvine musoro, kana isu tikayedza kurodha pasi izvozvi kubva kuLinux ichatitaurira kuti haienderane neyedu yekushandisa system.
Microsoft yakafumura iyo nyowani yeEdge Chromium logo
Mazuva ano akazivisawo iyo logo nyowani Microsoft Edge, iyo iri pakati pemufananidzo wemusoro. Mushure menguva apo yaishandisa E yakafanana neInternet Explorer, zvinoita sekunge Microsoft yasarudza kusiya browser rakakurumbira kumashure uye kutarisisa pane ramangwana mune zvayakanakira zvayakanakira. sarudzo, muchidimbu kutitadzisa kubva kuchinjira kuFirefox kana Google's Chrome.
Kana zviri izvo zvataizowana kana isu tikaisa Edge paLinux, ndinofunga zviri pachena kuti pakutanga taizove neChromium-based browser yakagadzirirwa neMicrosoft. Mazhinji mabhurawuza anotonhorera kunze uko akavakirwa paChromium uye anogona shandisa Chrome yekuwedzera, chimwe chinhu chatinogonawo kuita muEdge. Kune rimwe divi, avo vedu vakambozviedza paWindows vakaona kuti iri mvura kupfuura iyo Chrome yakagadzirwa neGoogle. Isu taizowanawo maturusi eMicrosoft, senge kugona kudhirowa pamapeji ewebhu, uye kusangana kwakanaka nezvigadzirwa kubva kukambani yeRedmond.
Iwe uchaisa Edge paLinux painowanikwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zviri pamutemo: Edge Chromium, Microsoft browser, iri kuuya kuLinux
Ini ndaizozviedza, zviripachena ndaizove nayo seyechitatu sarudzo, mushure meFirefox yangu neOpera, inova yechipiri pakombuta yangu.
Zvakanaka sei ... nekushayikwa kweimwezve kusiyanisa kweChromium (Chromium, Chrome, Opera, Vivaldi, FF, GNUzilla ...) x kana iri M $ saka zvirokwazvo zviri nani (usazviteerere).
Kana neFF uchireva Firefox, ndinotya kuti wakanganisa, nekuti inoshandisa yayo injini.
Raspbian PIXEL, forogo yePC neMac, ikozvino yakavakirwa paDebian Buster